Masõ sɛ Me ne Obi Bɛnantew? | Mmabun Bisa Sɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kazakh Kikamba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mongolian Myanmar Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urhobo Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Yɛka sɛ ɔbaa ne ɔbarima bi nam a, ɛkyerɛ sɛn?
Ɔbaa ne barima nantew, ne botae ne sɛn?
Manyin adu baabi a metumi ne obi anantew anaa?
Adɛn nti na ɛnsɛ sɛ wopere wo ho ne obi nantew?
Wo ne ɔbaa anaa ɔbarima bi taa pue. Yebetumi aka sɛ wo ne no nam anaa?
Wuhu sɛ w’ani gye abaayewa bi ho, na ɔno nso ani gye wo ho. Da biara, wofrɛ no tɛlɛfon so saa anaa wosɛnde no text message bebree, na ɔno nso sɛnde wo bi. Yebetumi aka sɛ wo ne no nam anaa?
Wowɔ abaayewa anaa aberante pɔtee bi. Bere biara a wo ne wo nnamfo behyiam no, ɛreyɛ ara ni na wo ne no aka abom denneennen. Yebetumi aka sɛ wo ne no nam anaa?
Asɛmmisa a edi kan no deɛ, ebia wuyii ano ntɛm sɛ aane. Nanso asɛmmisa a ɛto mmienu ne mmiɛnsa no deɛ, ebia ɛtwee wo kakra. Ɛnde, sɛ yɛka sɛ ɔbaa ne ɔbarima bi nam a, dɛn paa na ɛkyerɛ?
Yɛka sɛ ɔbaa ne ɔbarima bi nam a, ɛkyerɛ sɛ dwumadi biara mu no, ɔbarima no ani sã ɔbaa pɔtee bi. Wuhu sɛ wanya ne ho akɔnnɔ; ɔbaa no nso wɔ ɔbarima no ho akɔnnɔ.
Enti nsɛmmisa mmiɛnsa no nyinaa mmuae yɛ aane. Sɛ woyɛ ɔbarima na wo ne ɔbaa bi taa kasa tɛlɛfon so oo, anim ne anim oo, petee mu oo, kokoam oo, mpɛn dodow a mo mmienu nyinaa, obiara wɔ ne yɔnko ho akɔnnɔ deɛ, yɛbɛka sɛ monam.
Ɔbaa ne ɔbarima nantew, ne botae ne sɛn?
Ɛsɛ sɛ ɔbaa ne ɔbarima de adwempa nantew. Saa nantew no botae ne sɛ ɛbɛboa aberante ne ababaawa bi ama wɔahu sɛ wobetumi aware anaa.
Nanso, ebia w’atipɛnfo bi remmu ɔbaa ne ɔbarima nantew sɛ ɛyɛ aniberesɛm. Nea wɔpɛ ara ne sɛ wɔbɛfa ɔbaa anaa ɔbarima bi adamfo kɛkɛ. Nso wonni adwene biara sɛ wɔbɛware saa nipa no. Ebinom mpo deɛ, nea ɛyɛ wɔn fɛ ara ne sɛ nkurɔfo behu sɛ wɔn nso ne ɔbaa anaa ɔbarima bi nam. Wɔn adwene yɛ wɔn sɛ, ɛno na ɛkyerɛ sɛ wɔn nso wɔ hɔ anaa wɔn ani abue.
Nanso mpɛn pii no, nantew a ɛte saa nkosi baabiara; ɛnkyɛ na agye agu. Abaayewa bi a yɛfrɛ no Heather kaa sɛ: “Sɛ mmerante ne mmabaawa pii fi ase nantew a, ayere so ara nnawɔtwe baako anaa mmienu na wɔn ntam atetew. Ɛma wobu ɔbaa ne ɔbarima nantew sɛ biribi a wotumi tetew mu bere biara a wɔpɛ. Enti ɛma wosua awaregyae na ɛnyɛ aware.”
Sɛ wo ne ɔbaa anaa ɔbarima bi nam a, hu sɛ ne koma wom. Enti nya adwempa na woamfa ne koma anni agorɔ.—Luka 6:31.
Sɛ wo ne ɔbaa anaa ɔbarima bi nam na wonyɛɛ w’adwene sɛ wobɛware a, wote sɛ akwadaa bi a wanya abaduaba foforo. Ɔde di agorɔ a, na watow akyene
Susuw ho hwɛ: Sɛ obi de wo koma di agorɔ sɛ abaduaba a, ɛbɛyɛ wo dɛ? Akwadaa de abaduaba redi agorɔ a, enni gyina na afono no; wobɛhwɛ na wato akyene baabi. Obi yɛ wo koma saa a, wopɛ? Sɛ yɛde yɛ wo na ɛrenyɛ wo dɛ a, mfa nyɛ obi! Bible ka sɛ ɔdɔ ‘nyɛ ade a ɛnsɛ.’—1 Korintofo 13:4, 5.
Abaayewa bi a yɛfrɛ no Chelsea kaa sɛ: “Ɛtɔ da a, ɛyɛ me sɛ ɔbaa ne ɔbarima nantew yɛ biribi a yɛde gyigye yɛn ani kɛkɛ. Nanso sɛ baako adwene wɔ aware so na baako adwene nni so a, ɛma ɛyɛ aniberesɛm.”
Nyansahyɛ bi ni: Sɛ wopɛ sɛ wo ne obi nantew hwɛ sɛ mubetumi aware a, kenkan 2 Petro 1:5-7 na fa su baako a ehia sɛ wunya. Bosome baako akyi no, bisa wo ho sɛ dɛn na masua afa saa su no ho, na mayere me ho anya saa su no akodu he?
Wohwɛ a, mfe sɛn na ɛsɛ sɛ aberante anaa ababaawa bi di ansa na ɔne obi anantew?
Bisa wo papa anaa wo maame asɛm koro no ara.
Anhwɛ a, mmuae a ɔbɛma no bɛyɛ soronko koraa wɔ wo deɛ no ho. Ebi nso a ɛne wo deɛ no behyia. Mmabun bebree ahu sɛ ɛyɛ paa sɛ wɔmpere wɔn ho ne ɔbaa anaa ɔbarima bi nnantew kosi sɛ wobenyin ahu sɛnea wɔte ankasa. Ebia woka mmabun a wɔte saa no ho.
Saa na Danielle a wadi mfe 17 yɛe. Ɔkaa sɛ: “Mfe mmienu a atwam no, nea anka mɛhwɛ wɔ ɔbarima bi ho aware no no, ɛnyɛ ɛno na seesei mɛhwɛ. Merekasa yi mpo, mehwɛ me ho a, minnye nni sɛ metumi ne ɔbarima anantew. Sɛ mfe bi twam na me ara mihu sɛ me suban ayɛ kama paa a, ɛno na mɛhwɛ sɛ metumi ne obi anantew a.
Biribi foforo wɔ hɔ a enti ɛyɛ papa sɛ wompere wo ho. Obi nyin du baabi a, nna ho akɔnnɔ tumi yɛ kɛse paa wɔ ne mu. Bible ma yehu sɛ, sɛ obi wɔ tebea a ɛte saa mu a, na ɔda so ara yɛ “abofra.” (1 Korintofo 7:36) Enti sɛ ɔde ne ho kotwitwi ɔbaa anaa ɔbarima a, ɛbɛyɛ te sɛ nea wode pɛtro ne egya asi faako; akɔnnɔ no mu betumi ayɛ den araa ma ɔde ne ho ahyɛ nneyɛe bɔne mu.
W’atipɛnfo deɛ, wɔmfa wei nyɛ asɛm. Wɔn mu pii wɔ hɔ a, wɔn ho pere wɔn sɛ wɔbɛka ɔbaa ne ɔbarima nna ahwɛ. Nanso wubetumi akyerɛ sɛ w’ani abue sen wɔn! (Romafo 12:2) Adeɛ yi, Bible tu wo fo sɛ ‘guan aguamammɔ.’ (1 Korintofo 6:18) Sɛ wotwɛn kosi sɛ wubenyin a, ebetumi ama ‘amanehunu apare wo.’—Ɔsɛnkafo 11:10.
Sɛ wunnyin nnuu baabi a ɛsɛ sɛ wo ne obi nantew na wopepere wo ho a, ɛbɛyɛ te sɛ nea yɛrehyɛ wo ama woakyerɛw sɔhwɛ bi a wunsuaa ho ade. Ɛbaa saa a, na yɛne wo anni no yiye koraa! Ehia sɛ wunya bere sua ade no yiye, sɛnea ɛbɛyɛ a sɔhwɛ a worekɔyɛ no, wubehu n’ani so.
Saa na ɔbaa ne ɔbarima nantew nso te.
Ɔbaa ne ɔbarima nantew nyɛ ade a yɛde di agorɔ. Enti ansa na wo ne obi befi ase anantew no, ehia sɛ wugye bere sua ade bi a ehia paa. Ɛno ne sɛnea yɛfa adamfo.
Akyiri yi, sɛ wuhyia wo dɔ a, ɛbɛma mo adamfofa no mu ayɛ den paa. Adeɛ yi, yɛreka aware pa a, ɛno ara ne nnamfo pa a wɔde ɔdɔ abɔ ɔdɔ mu.
Sɛ wopepere wo ho ne ɔbaa anaa ɔbarima bi nantew a, ɛka wo hyɛ. Nanso sɛ woampepere wo ho a, ɛma wunya fahodi de ‘gye w’ani wo mmeranteberem.’ (Ɔsɛnkafo 11:9) Ɛbɛma woanya bere nso de anya suban pa. Ne kɛse paa no, ɛbɛma woanya bere de asiesie wo ne Nyankopɔn ntam kamakama.—Kwadwom 3:27.
Nea yɛreka yi nkyerɛ sɛ wuhu ɔbaa anaa ɔbarima a, pɛ baabi fa; wubetumi ne wɔn abɔ. Sɛn paa na ɛsɛ sɛ wo ne wɔn bɔ? Mmerante ne mmabaawa, sɛ muhyia a, monhwɛ sɛ mpanyimfo ka mo ho a wɔbɛhwɛ ama biribiara akɔ so pɛpɛɛpɛ. Abaayewa bi a yɛfrɛ no Tammy kaa sɛ: “Yegye yɛn ani saa a, ɛyɛ dɛ paa. Modɔɔso a, ɛno na ɛyɛ.” Monica ne no yɛ adwene. Ɔkaa sɛ: “Sɛ modɔɔso kakra na muhyiam gye mo ani a, ɛyɛ paa. Ɛma wo ne nnipa ahorow nyinaa bi bɔ fekuw.”
Nanso sɛ wonsoo sɛ wo ne obi bɛnantew na wututu mmirika de wo ti kɔhyɛ mu a, anhwɛ a na obi de wo koma adi agorɔ. Enti mpere wo ho. Fa saa bere yi sua sɛnea yɛfa adamfo ne sɛnea yɛyɛ adamfo. Sɛ daakye-daakye bi woyɛ w’adwene sɛ wo ne ɔbaa anaa ɔbarima bi bɛnantew a, wubehu sɛnea wote. Afei nso, wubehu nea ehia sɛ wohwehwɛ wɔ obi ho ansa na woaware no.
Ayɔnkofa Asomdwoe Ne Anigye Nantew a Edi Aware Anim Aware Ne Abusua Mmabun Bisa Sɛ Mmabun
Ɔdɔ Kann—Ɛne Deɛn?